Ogaden News Agency (ONA) – Laanta Qaxootiga ee Dalka Germany iyo Jaaliyada Somalida Ogadenya oo Kulmay.
Laanta Qaxootiga ee Dalka Germany iyo Jaaliyada Somalida Ogadenya oo Kulmay.
Posted by ONA Admin	/ December 14, 2014
Waxaa kulan kudhexmaray magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka Jaaliyada Somalida Ogadenya ee kudhaqan dalka Jarmalka iyo Laanta Qaxootiga uqaabilsan Dalka Germany. Dalka Jarmalka ayaa waxaa kudhaqan qaxooti badan oo kasoo jeeda wadanka Ogadenya kuwaasoo ay dhibaatooyin badani kahaysato arimaha laxidhiidha qaabilada iyo sharciyada daganaanshaha ee dalka Jarmalka.
Kadib markay Jaaliyada S.Ogadenya arimahan kusaabsan dhibaatada qaxootiga Ogadenya haysata ogaatay siwanaagsan loodarsay ayay go’aansatay inay dawladda laanteeda qaxootiga codsi ama cabasho ugudbiso, codsigii Jaaliyada ayay aqbashay dawladu, waxaana la isdhaafsaday xidhiidh badan oo isugujira qoraalo iyo telefoono kadibna waxaa la isku afgartay in kulankan oo madax kasocotay Laanta Qaxootiga Dawlada Jarmalka uqaabilsan iyo masuuliin matalaysay Jaaliyadda Somalida Ogadenya ay wada qaataan.
Waxaana siqoto dheer leh loo lafoguray dhibaatooyinkan aan soo sheegnay ee qaxootiga haysta iyo sidii loo sixi lahaa. Jaaliyaddu waxay dhankeeda ugudbisay madaxda Laanta Qaxootiga qoraal dheer oo katurjumaya dhibaatooyinka kala duwan ee haysata qaxootiga Ogadenya kasoo qaxaya iyo waliba dhibaatada guud ee wadankii hooyo kajirta. Waxyaabaha ay jaaliyaddu gudbisay waxaa kamid ahaa kaarar iyo warqado khaldan oo dadka lasiiyay qaarkood oo madaxdaas lahordhigay, waxaa kalooy iyana jaaliyaddu madaxdaas ugudbisay khariiradda ogaadeeniya iyo magaalooyinka ay wayaanuhu marwalba sida joogtada ah ee naxariis darida leh udhibaateeyaan tasooy ay masuuliintii Laanta Qaxootiga kasocotay aad usoo dhaweeyeen.
Masuuliintii dawladda kasocday waxay iyana jaaliyadda waydiiyeen su’aalo kusaaxbsan xaalada dhabta ah ee kuqasbaysa ineey qaaxooti intaas le’eg kasoo qaxaan Ogadenya. Madaxdii Jaaliyaddu su’aalahaas oo dhan waxay uga jawaabeen siwanaagsan taasoo daliil u ah khibrada dheer ee shacabka Somalida Ogadenya ay uleeyihiin wacdiga dhabta ah ee maanta shacabku kujiro iyo duruufaha uu marayo.
Kulankan oo ahaa kii ugu horeeyay oo dhexmara Jaaliyada Somalida Ogadenya iyo Laanta Qaxootiga Dalka Jarmalka ayaa jawi fiican kubilawday kuna dhammaaday taasoo siwanaagsan layskugu afgartay ujeedadii oogu waynayd ee kulankan loosoo maareeyay. Madaxdii dawlada Jarmalka matalaysay ayaa siwanaagsan oogu mahadceliyay masuuliintii matalaysay Jaaliyada sidii wanaagsanayd eey sharaxaada uga bixiyeen arrimaha laxidhiidha qaxootiga iyo tacadiyada lagu hayo shacabka gudaha Ogadenya kudhaqan. Madaxda Laanta Qaxootigu waxay dhankooda balan qaadeen ineey dar dar galidoonaan xidhiidhka ay laleeyihiin Maamulka Jaaliyada iyo ineey il gooni ah ku eegi doonaan arimaha kusaabsan Qaxootiga Somalida Ogadenya ee kusugan dalka Jarmalka. Dhanka Kale Madaxda Jaaliyada ayaa sidoo kale aad usoo dhaweeyay xidhiidhkan ugubka ah ee Laanta Qaxootiga iyo Jaaliyada dhexmaray. Waxaana hoosta laga wada xariiqay in wada shaqaynta iyo iskaashiga laxoojiyo.
ONA / FRANKFURT